Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo Ma ogtahay muhiimadda ay leedahay suuqgeynta fiidiyowga ee joogitaanka khadka tooska ah ee ganacsigaaga dhismaha? Macno malahan inaad tahay iibsade ama iibiye, waxaad u baahan tahay aqoonsi sumcad lagu kalsoon yahay oo sumcad leh si aad u soo jiito macaamiisha. Natiija ahaan, tartanka suuqgeynta guryaha ayaa ah mid aad u ba'an oo aadan si fudud ugu kobcin karin ganacsigaaga yar. Nasiib wanaagse, suuqgeynta dhijitaalka ah waxay siisay ganacsiyada nooc kasta leh qaabab badan oo waxtar leh si loo kordhiyo wacyigooda astaanta. Suuqgeynta fiidiyowga ayaa ah
Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Talaado, Oktoobar 27, 2020 Tom Siani
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Maanta barnaamijyada warbaahinta bulshada ayaa door muhiim ah ku leh nolosheena. Balaayiin dad ah oo adduunka ku nool ayaa u isticmaala iyaga si ay ula xiriiraan, u baashaalaan, u dhex galaan, u helaan wararka, u raadsadaan wax soo saar / adeeg, dukaan iwm. Da'daada ama asalkaagu muhiim maahan. Shabakadaha bulshada ayaa si weyn u saameyn doona howl maalmeedkaaga. Waxaad la xiriiri kartaa dadka leh danahaaga midkaaga oo kale waxaadna dhisi kartaa saaxiibtinimo waarta xitaa si qarsoodi ah. Waxaad u damqan kartaa dad kale oo badan oo ku kala baahsan